Ho an’i Kristy Hetsika natao hamondronana ny Kristianina rehetra
Notanterahina nanomboka omaly etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina haharitra efatra andro ilay hetsika hamondronana ireo Kristianina rehetra misehatra amin’ny ara-barotra….
Raha tsiahivina dia tohin’ilay raharaha METM tamin’ny taon-dasa izy ity. Araka ny fanazavan’ireo mpanaradia ity pasitera ity dia tsy neken’ny foibe METM tamin’izany fotoana ny fitakiana mangarahara nataon’ny pasiteran’izy ireo mikasika ny fitantanam-bolan’ny sekoly ao amin’ity fiangonana METM tetsy Antohomadinika ity ka nesorina tamin’ny toerany koa ilay pasitera. Tsy nanaiky ny mpino ka nikorontana ary nidiana vonjimaika ny fiangonana ny 16 martsa 2018 ka ny desambra 2018 no afaka nisokatra indray. Nisintaka tamin’ny METM ity fiangonana ity taty aoriana ka niditra amin’ny fiangonana mahaleotena karmela Ankorondrano na FMKA ary nahazo ny taratasy ara-dalàna na “récépissé” tamin’ny distrika ny 12 martsa 2019. Misoratra amin’ny fiangonana protestanta Antohomadinika ny tany, hoy ireo mpiaradia amin’ity pasitera ity, ka tsy tokony hidiran’ny METM intsony. Mety hitohy, araka izany, ny hetsik’izy ireo, raha tsy mahafa-po ireto mpino ireto ny voka-pitsarana.